यस्तै हो ‘प्रहरी मेरो साथी’ ? - punhill.com
यस्तै हो ‘प्रहरी मेरो साथी’ ?
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १८:४० मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि)
देशैभर नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी घटाउन संञ्चालन गरिएको ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान प्रहरीबाटै भएको व्यवहार र कार्यशैलीले अभियानलाई ‘खिल्ली’ उडाइरहेको भान दिन्छ ।
प्रहरीको एक जिम्मेवार अधिकृतले एक बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठी प्रहार गरेको दृश्यले प्रहरी सङ्गठनको नारा एउटा र व्यवहार अर्को देखिएको स्पष्ट पार्छ । प्रहरीको निर्मम कुटाइ खाने ती महिला हुन् हेमा श्रेष्ठ । जो आफै पनि पछिल्ला केही महिनायता सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल छिन् । श्रीमानले अन्याय गरेको, हेला गरेको भन्दै बच्चा काखमा च्यापेर प्रहरी कार्यलयमा देखिने गरेकी हेमालाई युट्युबरले लगातार पछ्याइरहेका छन् ।
खत्रीसँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै माला शाह नाम गरेकी महिलाले श्रेष्ठसँगै केही महिलालाई साथमा लिएर खत्रीको घर पुगेकी थिइन् । महिलाहरुको भिड देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । खबर पाएलगत्तै घटनास्थल पुगेका इन्सपेक्टर पौडेलले महिलामाथि बल प्रयोग गरेका हुन् ।
यता, इन्सपेक्टर पौडेलले आफूले लाठी हानेको स्वीकारेका छन् । अर्काको घरभित्र छिरेर तोडफोड गरेपछि सामान्य बल मात्र प्रयोग गरिएको इन्सपेक्टर पौडेलको भनाइ छ । घटना हुँदा महिला प्रहरी पनि घटनास्थलमै रहेको बताएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले घटनामा दोषी देखिए कानुनअनुसार सशक्त रुपमा कारबाही हुने बताए । उनले भने, ‘दोषी देखिए कसैलाई पनि छोडिन्न । पौडेलमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ ।’
ललितपुर परिसरकी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ । समितिलाई घटनाबारे यर्थाथ विषय पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।रातोपाटीबाट